‘बाहुबली ल्याउने त्यो डिजाइन एमालेले कदापी सफल हुन दिँदैन’ – YesKathmandu.com
काठमाडौं । अङ्गीकृत नागरिकलाई राष्ट्र प्रमुख वा कार्यकारी प्रमुख कसरी बनाउने ? १० वर्षपछि राष्ट्र प्रमुख वा कार्यकारी प्रमुख बनाउँदा राष्ट्र हितविपरीत हुन्छ कि हुँदैन सोचौं । नेपालका वास्तविक नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न हुँदैन । संसारमा हुँदै नभएको अभ्यास नेपालमा सम्भव छैन । लागू गर्न खोजिए पार्टीले अस्वीकार गर्छ ।
आगामी निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्र हो । निर्वाचन प्रक्रिया असफल भए संविधान र राजनीतिक दलको भूमिका निश्चित रुपमा निष्प्रभावी हुन्छ । यो बुझ्न हामीले जरुरी छ । संविधान संशोधनको बहानामा कुनै पनि चुनाव हुन नदिने र मुलुकमा खिलराज रेग्मीको अर्को अवतार जन्माउने खेल रचिएको छ । एमालेले त्यो डिजाइन कदापी सफल हुन दिँदैन ।
संविधान कार्यन्वयन गर्ने बेलामा संशोधनको बेमौसमी बाजा बजाएर कुनै पनि चुनाव हुन नदिने र अर्को खिलराज जन्माएर दलहरुलाई असफल पार्ने खेल भइरहेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न अबरोध खडा गरेर पुनः राजनीतिक रंग भएको बाहुबली ल्याउन लागिएको षड्यन्त्र सुरु भएको छ । यहि खेल बुझेरै एमालेले लोकमान सिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन अगुवाई गर्नुपरेको हो ।
अंगीकृत नागरिकलाई राज्य र सरकार तथा सुरक्षा निकायको प्रमुख बनाउन सत्तारुढ दलहरुले चाहे पनि एमालेले सफल हुन दिँने छैंन । संविधान संशोधनको बारेमा एमालेसँग सरकारले अहिलेसम्म ठोस छलफल गरिसकेको छैंन । यदि,नाजायज माग राखिएको छ भने त्यो कहिल्यै पूरा गर्न सकिदैंन ।
बैद्य माओवादीको बन्दले देशभरको जनजिवन प्रभावित, ३ सवारी साधन तोडफोड
मुलुकभरि पाँच सय विद्यालय गाभिए
पाँचसय बढी घरधुरीलाई १६ वटा टेन्ट
कता जाँदै हुनुहुन्छ ? महामहिम मुखर्जीको सवारीको कारण यी ठाँउमा मारमा पर्नुहोला